စစ်အသုံးစရိတ်ကို နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်၏ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း တောင်းခံ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
Zayar Zy shared Aye Chan Mon‘s photo.
ခင်ဦးသာ| January 11, 2013 |
၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အစိုးရအဖွဲ့ အသုံးစရိတ် လျာထားငွေတွင် နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်၏ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းကို စစ်တပ်အသုံးစရိတ်အတွက် တင်ပြတောင်းခံထားရာ ယခင်နှစ် စစ်အသုံးစရိတ်ထက် မြင့်နေကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၂-၁၃ ဘဏ္ဍာာရေးနှစ်တွင် စစ်အသုံးစရိတ်ကို နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်၏ ၁၄ ဒသမ ၃၉ ရာခိုင်နှုန်း သုံးစွဲရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
“ငွေစာရင်း ကော်မတီဝင်တချို့ ပြောတာကတော့ စစ်တပ်အသုံးစရိတ်က ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း ၀န်းကျင်အထိ တင်ပြထားတော့ တော်တော်ကြီး များနေတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ခွင့်ပြုပေးရေးကိစ္စကို လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးပြီးမှ ဘယ်လောက်ပဲ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ကြမှာပါ” ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
၂၀၁၃-၁၄ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘတ်ဂျက် လျာထားငွေ စာရင်းများကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များထံ ယမန်နေ့က ဖြန့်ဝေပေးထားသော်လည်း ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် အသေးစိတ် မလေ့လာရသေးကြောင်း၊ စာရင်းကို ကြိုတင်ရရှိထားသည့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီက ယခုအခါ စိစစ်သုံးသပ် စစ်ဆေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ သိရသည်။
ယခုနှစ်တွင် စစ်ရေးအသုံးစရိတ် တိုးတောင်းလာခြင်းသည် လက်ရှိဆင်နွဲနေသော ကချင်ဒေသ စစ်ပွဲများကြောင့် ကုန်ကျမှု များပြားသည့်အတွက်လည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ စစ်ရေးအသုံးစရိတ်သည် နှစ်စဉ်များနေသည့်တိုင် ယခင်ထက် တိုးမြှင့်ရန် မသင့်တော့ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်မောင်ရီ (ခ) ဦးခင်မောင်ရီက ပြောသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံက စစ်ရေးအင်အားကြီး နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ မလိုအပ်သေးတော့ စစ်အသုံးစရိတ်တွေ လျော့ချပြီးတော့ ပြည်သူတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး ကဏ္ဍတွေမှာ ပိုမိုသုံးစွဲသင့်ပါတယ်၊ စစ်အသုံးစရိတ်ဟာ ပြည်သူတွေအတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်မနေသင့်ဘူး” ဟု ၎င်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
စစ်တပ်၏ အသုံးစရိတ်အား လျှော့ချကာ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရေး တည်ဆောက်ခြင်းကိုသာ အဓိကထား ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း၊ တနိုင်ငံလုံး တည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားပါက တိုက်စစ်စရာ မလိုတော့ဘဲ ပြည်သူတို့၏ လူမှုဘ၀ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟုလည်း ဦးခိုင်မောင်ရီက ပြောသည်။
၂၀၁၃-၁၄ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် နိုင်ငံပိုင်စီမံကိန်းများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ၀န်ကြီးဌာန ၃၄ ခု အတွက် အသုံးစရိတ် လျာထားငွေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း ၄၆၈၉၆၁၉ ဒသမ ၈၆၂ တင်ပြထားကြောင်း၊ ၎င်းအနက် စစ်တပ် တခုတည်းအတွက် လျာထားငွေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၀၆၇၃၆၅ ဒသမ ၆၀၃ သန်းဖြစ်ကြောင်း The Voice Weekly ဂျာနယ်၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
စစ်တပ်သည် ဦးနေ၀င်းအစိုးရ လက်ထက်မှ နအဖ စစ်အစိုးရ လက်ထက်အထိ နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်၏ ထက်ဝက်နီးပါးကို သုံးစွဲခဲ့သော်လည်း တရားထုတ်ပြန်၍ ပြည်သူထံ အသိပေးလေ့မရှိပေ။၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး လွှတ်တော်များ ပေါ်ပေါက်ပြီးနောက်ပိုင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခု သီတင်းပတ်တွင် ပြန်လည်ကျင်းပနေသည့် ဆဋ္ဌမအကြိမ် လွှတ်တော်အစည်းများတွင် ဥပဒေကြမ်း ကိစ္စများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများ၊ ခေတ်မမီတော့သည့် ဥပဒေတချို့ ဖျက်သိမ်း ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးကိစ္စ၊ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အခြေခံဥပဒေခုံရုံးကိစ္စများနှင့် ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အသုံးစရိတ် ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးကြမည်ဟု ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောသည်။
မြန်မာ့ရေတပ်မတော်မှ စစ်သင်္ဘောတစီး (ဓာတ်ပုံ – မြဝတီ)
အေးချမ်းမွန်မှ ဧရာဝတီ တွင်ဖော်ပြသော သတင်းကို မူရင်းအတိုင်းမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်
This entry was posted on January 11, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဒါက်တာအေးချမ်းသည် ဌေးလွင်ဦး နှင့် စကားစစ်မထိုးသင့် ဟု ရခိုင်သမိုင်းသုတေသီ ဆရာတော် နှစ်ပါး က သုံးသပ်
အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအ၀င်နိုင်ငံပေါင်းနှစ်ရာကျော်နှင့် ချိတ်ဆက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသော Western Union နှင့်မြန်မာနိုင်ငံရှိဘဏ်ခြောက်ခု … →